Seluyasebenza uhlelo lokusebenzisa intanethi kuMnyango wezaseKhaya eKZN | News24
Seluyasebenza uhlelo lokusebenzisa intanethi kuMnyango wezaseKhaya eKZN
Durban - UMnyango wezaseKhaya kwaZulu-Natal uthi seluyasebenza uhlelo lwabo lokusebenzisa izinsiza zawo online.
Lokhu kulandela izinkinga ababe nazo ngesonto eledlule kungangeneki kulolu hlelo.
"Izinkinga sezilungisiwe kanti abantu bangakutholozela ukusebenzisa lolu hlelo ukuze bazenzele kalula konke amafuna ukukwenza,"kusho okhulumela lo mnyango uMava Scott etshela abeNews24 ngoLwesithathu ebusuku.
OLUNYE UDABA: Ubhekane nobutatata uMnyango wezaseKhaya
Lo mnyango ubenezinkinga zokwamukela amakhadi omazisi kanye nawezokuvakasha kulolu hlelo. Lolu hlelo belulokhu lungasebenzi kusukela ngesonto eledlule kanti lokhu bekubacasula abantu abebezwakalisa ukudinwa kwabo kubasebenza balo mnyango.
NgoMsombululo, kwabizwa amaphoyisa emahhovisi asemgwaqeni uMngeni eThekwini njengoba abasebenzi bebesatshiswa ngokubulawa.